Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-Deganaan ka jirta degaano dagaal ka dhaceen iyo khasaaraha ka dhacay
Arbaco, Maarso, 07, 2018 (HOL) - Xaalada degaanno dagaalo shalay ka dheceen oo ka tirsan Buuhoodle ayaa maanta degan iyadoo waxgarad iyo ciidamo dhexdhexaad ah ay ku baxeen deegaannadaas.
Deegaanka Gocondhaale ayaa la sheegay in uu ka dhacay barakac baahsan, iyadoo xiligan lagu jiro biyo La'aan baahsan.
Qasaaraha dagaalkii shalay ka dhacay ayaa la sheegay in uu sababay 2 qof oo dhimasho ah soda uu HOL u xaqiijiyey Maxamuud Cige oo ka mid ahaa dadkii dhexdhexaadinta u tegey.
Cige waxa uu intaas ku daray in dhibaato xooglihi ka taagan tahay dadka rayidka ah ee colaada la geliyey iyagoo dhibaato la tiicayey abaartu sababtay.
"Dadka Gocondhaale degan dhamaantood waa dadkii xooluhu ka dhamaadeen, hadana colaad baa loogu daray xalkeeduna waa ha dhamaadaan" ayuu yidhi Cige isagoo intaas Ku daray in ay dadaal wadaan.
Labada beelood ee haatan colaadu ka dhex bilaqbantay ayaa dagaal aad loogu hoobtay 11 sano ka hor ku dhex maray Buuhoodle taas oo si dhib ah lagu soo afjaray, taas oo keentay in cabsi laga qabo colaada labada beelood.